Magento vs. Shopify vs. WooCommerce - Sarudza iyo Right eCommerce Platform - NewGenApps
eCommerce, Magento, Shopify, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Magento vs. Shopify vs. WooCommerce - Sarudza Yakakodzera eCommerce Platform
Kusarudza chikuva chakakodzera chechitoro chako chepamhepo chinogona kuita chinotyisa kwazvo. Nevanopfuura makumi matatu + Content Management MaSystem (CMS) sarudzo dziripo ecommerce webhu kuvandudza uye kuti usakanganwe sarudzo yekuvandudza webhusaiti yako kubva pakutanga, vatungamiriri vebhizinesi vakanamira pakati pezvakawanda sarudzo pasina zano rinoita. Kusarudza nzira kwayo yekupa hupenyu kune yako eCommerce pfungwa inogona kuva chinhu chinosarudza kubudirira kwayo. Kana iwe ukaita sarudzo isiriyo mudanho rekutanga re dandemutande budiriro unogona kukanganisika nezvikanganiso zvezano rako, mari dzisingakoshi kana zvakatoipisisa ungatofanira kutama kubva pane chimwe chikuva kuenda kune chimwe chiri mutoro mukuru wezvemari. Kunyangwe iyo nhamba yesarudzo isina muganho, sarudzo inowanzo rovera pasi kune vatatu vakakurumbira vatambi mumusika - Magento, WooCommerce, uye Shopify. Tichapindura mibvunzo yako yese nekukurumidza: a) Ndeapi acho? b) Vakasiyana sei kubva kune mumwe nemumwe- Magento vs. Shopify vs. WooCommerce? uye c) Ndeipi yekusarudza Magento, Shopify kana WooCommerce?
Yakagadzirwa uye yakavambwa neVarien Inc. muna 2008, Magento ndeye open source CMS chikuva chakagadzirirwa kunyanya kuvaka eCommerce zvitoro. Iyo php yakavakirwa yakasimba papuratifomu yakagadziridzwa kuti igone kugonesa maminiti madiki tweaks kune eCommerce store. Iyo inouya mumapakeji maviri imwe ndeye nharaunda yakavakirwa open source uye imwe ndiyo SaaS-based Enterprise edition. Magento inovandudza hushamwari system uye inouya seyakazvimiririra application kureva kuti iwe unofanirwa kuwana yako yekutambira. 5 lakh plus mawebhusaiti ari kushandisa Magento kubva pari zvino uye nhamba iri kuramba ichiwedzera. Iyo yemahara mutengo uye kuchinjika account yekuzivikanwa kwayo kukuru mumusika.
Shopify yakazara-yakazara eCommerce mhinduro ine chimiro chakapfuma sisitimu, mukati-yakavakwa yekutambira uye yekubhadhara magedhi. Shopify inorerutsa maitiro ese ekusimudzira nekupa imwechete mushandisi interface ine zvese zvakavakwa-mukati. Shopify iri nyore kushandisa kunyangwe kune vanhu vasina kodhi yekumashure. Chinhu chega chekunetsekana nacho kuita kuti vanhu vauye kuchitoro uye nekugadzirisa zvinhu. 3 Lakh plus mawebhusaiti ari kushandisa Shopify kubata kwavo online chitoro.
WooCommerce ndeye WordPress yekuwedzera yakanangana nekuwedzera eCommerce kugona kune WordPress. Iyo yemahara kushandisa plugin iyo inosanganisa isina musono neWordPress uye inotsigira akawanda madingindira uye plugins. Kugadzirirwa iyo inonyanya kufarirwa CMS munyika ine zvakanakira - WooCommerce inoshandiswa pamamiriyoni maviri pamwe nemawebhusaiti anoita kuti ive inonyanya kufarirwa. eCommerce papuratifomu nhasi. WooCommerce inounza chiyero chakakwana pakati pekushandisa uye maficha akaita kuti ive sarudzo iri pachena kune vazhinji varidzi vebhizinesi repamhepo.
Magento vs. Shopify vs. WooCommerce - Ndeipi iri Nani?
Heano 360-degree kuenzanisa pakati peMagento, Shopify uye WooCommerce kuti ikubatsire kusarudza chairo chikuva cheako e-bhizinesi. Kuti zvive nyore kunzwisisa tinenge tichivaenzanisa nematanho anotevera:
Magento uye WooCommerce ese ari maviri open source chikuva zvinoreva kuti vakasununguka zvachose. Kune rimwe divi, Shopify inotanga ne29 $ pamwedzi. Rutivi rwakajeka neShopify nderekuti rinouya nekutambira kunosanganisirwa iwe uchizoda kuisa mari mune yechitatu-bato yekutambira uye manejimendi neMagento & WooCommerce. Magento inouyawo ne Enterprise edition kana uri kuronga chinhu chikuru asi chiri kudhura hachiwanikwe pachena.
Mhinduro dzese dzakakwira-chibatiso hurongwa zviripo navo. Ongororo yehutsotsi muShopify inowanikwa kune zvirongwa zvinotanga kubva ku79$/mo izvo zvinosiya vashandisi vekutanga pazvisina kunaka. Magento ndiye anokunda kana zvasvika pakuchengetedza sezvo ichiuya nemanyorero ekuchengetedza zvigamba zvinogona kuiswa neane ruzivo Developers. WooCommerce inogara nhaka kuchengetedzeka kwayo kubva kuWordPress inova CMS inopa simba makumi mashanu muzana einternet nhasi. Zvizhinji zvezvigamba zvekuchengetedza zvinouya neWordPress zvigadziriso saka hapana zvakawanda zvinofanirwa kuitwa nevashandisi vakananga.
Shopify's source code haisi kuwanikwa Developers uye nekudaro, iwe unofanirwa kushanda neasati avakwa maficha. WooCommerce uye Magento zvese zvinopa yakakwira mwero wesarudzo dzekugadzirisa sezvo ese ari maviri akavakirwa php uye anogonesa Developers kuita shanduko sezvavanoratidzika kunge zvakakodzera. Asi kana zvasvika kune yakakosha kugadzirisa, Magento zvakare mutungamiri. Iwe unozofanirwa kuunza mari yekusimudzira asi kana iwe uchida yakakwira-level kugadzirisa saka Magento ndiyo yekuenda-kupuratifomu.
6 Makomborero ekutsvagisa eCommerce Development
Ese matatu mapuratifomu anopa mubhadharo masuo ekutengesa musono. Shopify inopa makumi manomwe + ekubhadhara sarudzo pamwe neyechitatu bato yekubhadhara kunyorera zvakare. Commission paShopify masosi ari pakati pe70% kusvika 3% yemasuwo akavakwa. Magento inopa Paypal senzira yayo yekutanga yekubhadhara asi iwe unogona kuwedzera yechitatu bato masuo nema plugins zvakafanana zvinoenda kuWooCommerce futi. Saka pano isu tinoona kuti Shopify inouya neakanakisa mashandiro pane yayo yepakati.
Ungasarudza Sei Yakakodzera Kubhadhara Gateway
Themes uye Wedzera-ons:
Magento inouya neakawandisa raibhurari yematimu uye ekuwedzera-ons uye saizvozvo WooCommerce. Kunyangwe Shopify iri kuwedzera pamusoro peichi ichiri kusaririra kumashure kumashure kana zvasvika pakuwedzera-ons uye madingindira. Kana iri yemaprimiyamu madingindira, Shopify inodhura zvakanyanya nematimu anotangira kubva ku140 $ nepo mamwe ari zvipo izvo zvakaderera se1 $. Kuenzanisa nhamba dzeWooCommerce kunouya ne29000 + addons, Magento inouya ne5000 + add-ons uye Shopify ine chete 150 addons.
Ziva izvo zvakakosha zveChinomwe zvekugadzira eCommerce Saiti
Magento inopa ngoro yekutevera, makuponi uye sarudzo dzekudzikisa chimwe chinhu chinoshaikwa mune zvese Shopify uye WooCommerce inoita kuti ive yakanyanya kushanda CMS ye eCommerce zvitoro. Asi kushanda uku kunouya nemubhadharo, iwe uchafanirwa kuhaya ane ruzivo mugadziri wekubata Magento. Shopify uye WooCommerce, kune rumwe rutivi, ane hushamwari-mushandisi saka unogona kutanga pasina ruzivo rwehunyanzvi.
WooCommerce kuve chikamu cheWordPress inouya nenharaunda huru yevashandisi inoteverwa neMagento. Shopify ine nharaunda diki iyo inoperekedzwa nerutsigiro rwevatengi izvo mamwe mapuratifomu anotadza kupa. Magento Enterprise inouya nerutsigiro rwevatengi asi inodhura zvakanyanya kana ichienzaniswa neShopify. Kazhinji mugadziri akanaka anokwanisa kugadzirisa nyaya sezvo mizhinji yemibvunzo yakatopindurwa mukati open source CMS masisitimu. Asi hapana chinotsiva rutsigiro rwunopihwa nevanhu umo Shopify inokunda.
Ndeipi Platform Yokusarudza - Magento, Shopify kana WooCommerce?
Iye zvino zvatiri kupfuura nekuenzanisa Magento, Shopify uye WooCommerce, inguva yekusarudza mhinduro yakanakisa. Apa ndipo panosvika hunyanzvi hwedu. Isu tiri NewGenApps vane makore 9 ehunyanzvi mukugadzira webhu uye nharembozha ine ruzivo rwakajeka rwekushanda nayo eCommerce makambani pasi rese. Kana iwe uine WordPress chitoro saka zvine musoro kuenda neWooCommerce. WooCommerce ine yakanaka yakakwana yekugonesa simba eCommerce pfungwa uye iwe unochengetedza nguva nemari yakashandiswa pakubva kune imwe puratifomu kuenda kune imwe.
Magento vs. Opencart - Verenga iyo Yakazara Kuenzanisa
Kana iwe urikuvaka kubva pakutanga ipapo sarudzo dzako dziri nani ndedzekusarudza pakati peMagento ne Shopify. Kune varidzi vemabhizimusi madiki avo vari kuda kubata zvitoro zvese ivo kana atleast vanoda kuzviita mukutanga saka Shopify ndiyo yekuenda kusarudzo. Magento yakanakisa kana iwe uine zano hombe mupfungwa uye uchida kuita zvese nekukwana. Iyo nhanho yekugadzirisa Magento inopa mukusanzwisisika asi iwe unofanirwa kuve nehumwe hunyanzvi hwekukodha kugadzirisa izvi. Magento ine mwenje wekufunda wakareba saka uri nani nekuhaya mugadziri pane kuyedza kuyedza wega. Kana zvabatanidzwa ne gore kadambari, Magento ndiyo yakanyanya kusimba mhinduro ye eCommerce mabhizinesi uye inopa mibairo mikuru maererano neROI.
Kana iwe uchitsvaga mugadziri kuti atarisire yako eCommerce zvinodiwa kupfuura zvauri panzvimbo chaipo. Isu tiri NewGenApps kupa mhinduro dzakasimba dze eCommerce kusimudzira nekuchengetedza pamwe nekubata kwegore saka zvese zvaunoda kuti uve nehanya nazvo ibhizinesi rako rekutanga uye nhanho yekuvandudza IT kwatiri. Bata nesu kuti uwane rumwe ruzivo.